Kedu igwe igwe eletrik kachasị mma ịzụta? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Igwe eletriki igwe - otu esi ekpebi
Kedu igwe igwe eletrik kachasị mma ịzụta?
MGBE AH 20 20MPHEbikedị mfe na-enweta mmeri n'ozuzu yaigwe eletriki kacha mmanke 2021 Atiya. Thedị a na-aghọ ngwa ngwa kachasịewu ebikendị na-emepụta ụwa dị iche iche nke ụdị ewu ewu na nke ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
You maara na igwe anyịnya igwe a na-ere kwa afọ na US, naanị ihe dị ka 250,000 bụ igwe eletrik. Dị ka ala dị ka nke ahụ nwere ike iyi, ọnụọgụgụ arịala elu karịa afọ ole na ole ịre ahịa e-igwe. Taa, anyị na-atụle njirimara, atụmatụ, na ojiji nke igwe elektrọnị ise nke ezigbo ndị mmadụ nọ na ụlọ ọrụ ahụ emego .Ma nọrọ ruo mgbe ọgwụgwụ ga-ahụ ntụnyere isi-na-isi nke nkọwa niile! Abụ m Glenn, ka anyị bịaruo ya nso.
Ka amara gị ọkwa mgbe edere akụkọ ọhụụ, pịa akara ngosi mgbịrịgba dị n'okpuru, n'akụkụ aka Ndenye aha -Button. Daalụ maka ịhụ Anya Uche! Na ụlọ ọrụ dị ka Aventon, ị ga-enweta ụlọ ọrụ raara onwe ya nye iji nyere onye ọ bụla aka ịnya ịnyịnya ígwè ha n'agbanyeghị afọ ma ọ bụ ikike. Ha na-agbasi mbọ ike ịrụ igwe igwe dị ọnụ ala nke ga-ejide gị.
Sinch bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na e-igwe kwụ otu ebe ngwaahịa na ya na ya foldable etiti ndụ ruo aha ya, na-asọ oyi mgbanwe n'etiti a n'aka iga na a n'aka nke iga, ọ bụ naanị a Sinch! Na mgbakwunye na ịkwado n'ụzọ dị mfe na akpati ụgbọ ala gị, Sinch na-enwekwa nkwụsịtụ n'ihu na taya 20 'x 4' iji mee ka ịnyịnya gị dị mma ma ọ bụ pụọ n'okporo ụzọ. Ga-achọ ịma otú igwe kwụ otu ebe ahụ, ọ ziri ezi? Na mgbakwunye, na mgbakwunye na taya ndị a kpọtụrụ aha, nke na-eme ka ọ dị mma, a na-ejikwa Sinch nwere ọkwa ise nke enyemaka pedal dabere na ọzụzụ achọrọ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọghị otu ma ọlị, enwekwara ọrụ gas ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ebe ahụ.
Ọnụọgụ nke Sinch dị gburugburu 40 kilomita na otu ụgwọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na iji njiri mara njegharị ahụ na njem ahụ niile, ịnwere ike ịtụ anya ihe dịka ọkara nke ahụ. Achọpụghị ọsọ ọsọ kachasị nke 32 km / h.
Ọ bụrụ n'ịchọ Sinch, ha ga-ebuga US na EU! MOAR Bike bụ ụlọ ọrụ na-eku ume ịgba ígwè. Ha bụ ndị na-agba ịnyịnya na iji ya kwa ụbọchị ma nwee mmasị ịme igwe nwere ike inye aka. Ha makwa na ihe na-agba ọsọ na-eme ka igwe kwụ otu ebe dị obere karịa igwe kwụ otu ebe.
N'ihi na MOAR Bike chọrọ e-igwe kwụ otu ebe bụ ihe egwuregwu, nchekwa ma nwee ntụkwasị obi zuru oke iji mee ka ị rụọ ọrụ, ụdị ha niile nwere ụfọdụ isi ihe jikọrọ ọnụ. Batrị 48 V Samsung, nkwusioru zuru ezu, taya 26 'x 4' na enyemaka pedal 5 bụ ihe ndị kachasị mkpa, yana obere ọrụ ole na ole dịka opi na egosi. Ọ bụghị naanị ya kwenyere na nchekwa.
You nwere ike ime otu ihe ahụ na ikuku ikuku a, mgbochi ohi igwe kwụ otu ebe site na Mengshen. Ga - ahụ mkpu a na - eme mkpọtụ na 113 dB na nkọwa ahụ. ARMỌ igwe kwụ otu ebe nwere ụdị anọ.
A na - eme ha niile site na otu isi wee kpụzie ya na ngalaba niche nke ndị na - agba ịnyịnya eletriki. Anyanwụ na obi uto bụ maka onye nwere mmasị karịa gị na 250 ma ọ bụ 350 W n'azụ ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nke a workhorse, 500W azụ wheel bụ a bit ọzọ dị ike, na 180mm n'ibu diski breeki na-eme maka ya.
Mgbe ahụ, enwere 02 maka ndị etinyela ego n'ịdị mma. Ihe ngwunye ohuru 1000 W, batrị 48 V 17 Ah na Shimano 8-speed na-eme ka ị nwee ọ drivingụ dị ukwuu. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa na nke kachasị mma, mgbe ahụ Rapt2 bụ ụdị gị.
Na 1000W ultra mid-drive motor, torque sensor, na 9-ọsọ Shimano gears, Rapt2 bụ ịnyịnya ọhịa n'ezie! Abụ m Allie na ọ bụ Mind’s Eye Trivia Time. Ọ bụrụ na i lee foto ndị a anya, ị ga-ama ihe nke a bụ na ebe o si bido? Hapụ azịza ziri ezi ma ọ bụ echiche gị kachasị mma na ngalaba nkọwa dị n'okpuru. O nwere ike isi ike ịchọta ụzọ ndị ọzọ iji ụgbọ njem ịchọta ma mepụta, mana ụmụ okorobịa nọ na SPLACH ekwela ka nke ahụ wepụ ha.
Ha maara otu esi agbanwe teknụzụ ọhụụ ma nye ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na gburugburu ebe obibi. Na mgbakwunye na ọtụtụ nnukwu skuta eletrik, SPLACH na-anwa ịme igwe eletrik. Stark bụ igwe eletrik na-atọ ụtọ.
Ozugbo nhazi nke chassis na-adọrọ adọrọ, ya na taya 20 'x 4' nwere obi ike na ugwu ujo azụ na-adọta uche gị. Ọ bụrụ na ị na-ele anya na okpokoro na n'okpuru akpa akwa, ị ga-ahụ nhazi batrị 48V 15Ah abụọ nke na-enye ohere maka ọtụtụ kilomita 70 mgbe ị na-eme ngwa ngwa ma ọ bụ ruo 100 kilomita mgbe ị na-eji naanị aka ụkwụ. Ikwu okwu banyere enyemaka pedal: Stark nwere ọkwa 6 ya, igwe kwụ otu ebe jiri 7-speed Shimano nnyefe.
Ma n’agbanyeghi na ichoghi ikpughe ya nye ihe ojoo n’otu abali, Stark nwere ike iwepu obere ihe na uzo. Ọbụna o nwere eriri mmiri na-enweghị mmiri iji chebe ọ yourụ gị dị oke ọnụ ahịa. Ma ọ bụrụ na ị bụ obere obere-echegbu onwe-na ọhụrụ gị nzọ ụkwụ thrasher Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike jidere a na ịba uru mkpọchi ka e meere gị nchegbu.
Njikọ ahụ dị na nkọwa. Stark bụ ezigbo enyi maka onye ọ bụla hụrụ njem n'anya, ma ọ bụ obere njem ma ọ bụ oge ọchị! Na SPLACH na-anapụta ụwa niile! Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgba ọsọ n’enweghị nsogbu n’okporo ụzọ na e-igwe kwụ otu ebe, ka ọ bụ gị? onye na-ebugharị gị? ma ọ bụ ma eleghị anya ihe eyịride n'etiti? ka anyị mara na ihe. Ọ ga-amasị anyị ịnụ echiche gị! Mmasị bụ ihe onye ọ bụla nwere ike ịghọta.
Mgbe agụụ mmekọahụ nọ ebe ahụ, enwere ọchịchọ maka izu oke na ịdị ukwuu. Ọ ga-esiri gị ike ịchọta ụlọ ọrụ nwere mmasị karịa Ariel Rider Ebikes. Ha ọhụụ bụ iji nweta ọtụtụ nke e-anyịnya igwe na dị nnọọ ka anyị na-arụ ọrụ ha n'ihi na ị na-ekwuchitere gị! X-Class 52V bụ mmụọ ọjọọ ọsọ na nke ahụ abụghị ahụhụ; Ezubere ya ịbụ otu n'ime igwe eletriki igwe eletrik kachasị nke Ariel, nke nwere ọsọ ọsọ karịa 50 km / h.
Otu n'ime ihe dị na achicha obi ha bụ teknụzụ igwe eji arụ ọrụ. Metalgwè ahụ na-eme ka ike dị elu karịa, ike na ọsọ karịa ngwa nịịl ọdịnala. Dị ka aha ahụ na-egosi, Roadrunner a nwere usoro batrị 52V nke na-eji nnukwu njikwa 35A eme ihe ma na-agba ọsọ 1000W nke nwere ike kachasị elu nke 2000W! E wezụga eziokwu ahụ bụ na X. onye na-agba ọsọ nke korota bụ 52V nwekwara ọtụtụ 70 + kilomita na enyemaka ụkwụ 5-ụkwụ, ihe ngosi iji gosipụta dị ka nkezi njem na-aga bụ nanị kilomita ise ị nwere ike ịgba ọsọ igwe a ụbọchị na-enweghị ya Jiri ụgwọ.
Banyere ọrụ eletrọniki, ị ga-ahụ ihe ngosi LED maka nchoputa ngwa ngwa ma dị mfe, ọkụ ihu na azụ na ọdụ ụgbọ USB abụọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibu ibu, ịnyịnya ibu a nke paụnd 300 pound bụ nke gị, ọ bụrụkwa na ị dabere na USA ma ọ bụ Canada, ị nwere ike ịtụrụ Ariel Rider Ebike gị taa! Drum roll, biko, maka na ọnụọgụgụ anyị abịala! Mgbe otu n'ime ihe ịga nke ọma na-ewu ewu na akụkọ ihe mere eme na 2015, SONDORS Original Ya ike ya na-aga n'ihu. Emeghere ụlọ ọrụ abụọ na-enweta ọtụtụ nde dollar n'otu afọ.
Kemgbe ahụ, ha ejirila ọkụ eletrik na ụwa igwe kwụ otu ebe, ha na-eme atụmatụ ịga n'ihu ime ya. Yabụ kedu igwe eletriki igwe nwere ike ịdị oke ala ịda na ọnọdụ anyị? Anyị ga-achọ ịme ka ị mata kpakpando! Nke a mara mma na pụrụ iche bike dị na atọ na agba; na-ekpo ọkụ supernova, kpochapụwo Mat nwa na mgbanwe wepụrụ ebubo. A haziri Rockstar site na mkpịsị ụkwụ ya ruo na nsọtụ ya iji gbochie ebe a na-ama jijiji.
n'èzí ịgba ígwè
Kwọ ụgbọala n’elu ugwu adịtụbeghị mfe, ọ dịkwabeghị ụtọ ịnya ụgbọ ala! - Nkwụsịtụ, 750W nke ike iji mee ka ugwu ọ bụla dị larịị site na mpempe ụgbọala, yana 21 amp-ike nke ike, Rockstar na-ahapụ gị ka ị kụrụ gas ma mee egwu apịtị. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, Rockstar adịghị egbu oge na ọsọ. Ọsọ kachasị nke 45 km / h na nso nke 40-60 kilomita, dabere na iji enyemaka pedal, mee maka oge ị cheụrị ọ .ụ.
Ihe ntinye 11 nke na-ebugharị na ihe na-eme ka ihe na-eme ka ha nwee ike ịchịkwa mmasị gị mgbe ị na-agba ịnyịnya. Rockstar na-akwado ikike ibu nke 300 pound ma dịrị ihe dịka 83 pound n'onwe ya. Eku bụ akpan esorowo ma mee nke aluminom, na aka na oche hụ na a ọma na ergonomic ọkọlọtọ.
Na nnukwu ozi ọma maka ndị nọ na US, EU, ma ọ bụ UK; SONDORS na-ebugara gị, ị nwere ike ịtụ gị SONDORS Ebike taa! Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, ịnwere ike inyere anyị aka site na ịpị bọtịnụ Likedị, ịdebanye aha na ịnọ na ụbọchị ọ bụla.
You nwere ịgba ụkwụ na igwe eletrik?
Ọ dabere naigwe kwụ otu ebe. Fọdụigwe eletrikrere na North America kweregịiji rụọ ọrụ site na ịgbanye trotul enweghịna-agbagharị. Ọbụna makae-ịnyịnyananweetrotul,gị'Llmkpa pedalmgbe ị na-arịgoro ogologo, ugwu nta, ọ bụ eziegịagaghịnwere pedalsiri ike.
Anyị niile maara otu igwe kwụ otu ebe ọkọlọtọ si arụ ọrụ, ị na-agbanye ụkwụ gị n'elu ya, ị na-atụgharị pedals na igwe kwụ otu ebe na-aga, ị na-adọta brekị, ọ na-abịa ịkwụsị otu njikwa njikwa na ngwakọta dị iche, ị nweta e- igwe kwụ otu ebe, mana kedu ka ọ si arụ ọrụ niile? Taa, anyị na-aza ajụjụ a na ụfọdụ ajụjụ ndị ọzọ dị mkpa. (Music jingle) E nwere uzo uzo abuo di iche-iche. Otu bụ enyemaka gas, nke ọzọ bụ enyemaka pedal.
Na eMTB enyere aka na gas, gbanye mgbatị ahụ ma ọ bụ pịa bọtịnụ ma moto ahụ ga-arụ ọrụ ma ị nwere ike ịgafe na-enweghị ịpịgharị. Dị ka igwe kwụ otu ebe na-enyere aka aka, ị ga-aga pedal iji mee ka moto ahụ rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịnweghị pedal, ị gaghị aga ebe ọ bụla na ndị a bụ igwe kwụ otu ebe anyị lekwasịrị anya taa.
Ya mere igwe eletriki igwe eletrik niile nwere isi ihe atọ na-eme ka ọ bụrụ eMTB. Nke ahụ bụ batrị, moto na njikwa ahụ. Kedu ka ọ na-adị gị n'ịgba eMTB? Ọfọn, ọ bụ otu ihe ahụ dịka igwe kwụ otu ebe, ị na-agbagharị ma na-agba ịnyịnya, ọ nwere enyemaka ahụ site na injin nke na-adị gị. 'Mgbe onye obula nwetara gi onu ulo, tinyere ndi di elu.
Mana otu o si enyere gi aka nwekwara ike idi iche. Nwere ike ịgbanwe site na iji ngbanwe mode. Yabụ ka anyị lelee nkwado dị iche iche na ọkwa.
Egwuregwu igwe eletriki gị na-enye gị ọkwa nkwado dị iche iche ị nwere ike ịtọ site na iji usoro arụmọrụ. Shimano E8000 sistemụ m na-eji ebe a na kaniyon m taa nwere ntọala mwube, ruo na ọnọdụ nkwalite. Ugbu a, ọ ga-adị ka igwe ele ugwu dị arọ.
Can nwere ike ịkwanye ya, mana ọ gaghị adị mma nke ukwuu. Mgbe ahụ ị nwere ECO nke na-enye gị obere nkwado, ọ na-enye gị nkwado 120%. Mgbe ahụ ị nwere usoro egwu egwu nke dị n'etiti.
Mgbe ahụ ị nwere agbam ume mode nke na-enye 300% aka na nke ahụ ga-enye gị ụda enyemaka na ndị ahụ buru ibu, teknụzụ. Ma ndị a niile dị iche iche ike ụdịdị ga-enwe dị iche iche utịp na batrị gị. N'ikwu okwu banyere batrị, ha na-abịa n'ụdị na nha niile ma a bịa n'ihe gbasara eMTB.
Offọdụ n'ime ha na-etinye ya n'èzí, ị nwere batrị ndị ejikọtara ọnụ, ị nwere batrị ndị a na-agbanye na tubes. Ugbu a a tụrụ batrị na watt awa. Yabụ ị nwere batrị pere mpe nke ọkụ, ị nwere batrị ndị a buru ibu nke na-ejide ụgwọ karịa.
N’okwu ndị dị mfe, jiri ha tụnyere batrị AA na batrị D. Batrị buru ibu karị, otu kilomita ka ị ga-aga njem. Ya mere banyere ịgba batrị gị? Ọfọn, ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ekwentị, ị na-etinye chaja gị na mgbidi, jikọọ ya na igwe kwụ otu ebe, hapụ ya ruo oge ole na ole, nke ahụ ga-ewe ya ihe ruru 100.
N'Aka%, na i nwere ike ma na-agba ịnyịnya ain. Ugbu a ụfọdụ batrị dị iche na otu esi agbanye na etiti ahụ, nke pụtara na ị nwere ike iwepụ batrị ahụ na igwe kwụ otu ebe gị, buru ya gaa ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ Ebe ọ bụla ịchọrọ ị fanye batrị gị, tinye ya n'ime chaja gị na ụlọ, wee tinye ya ọzọ na igwe kwụ otu ebe. Agbanyeghị, ụfọdụ igwe kwụ otu ebe nwere batrị arụnyere, nke pụtara na ị ga-ewere igwe kwụ otu ebe n’ime ụlọ iji mezue ụgwọ a.
N'ihe banyere moto na eMTB gị, ha ga-abịa na nhọrọ ole na ole. Nwere ike ịnweta nkeji ụgbọala, nke pụtara na ha na-agbago n'azụ ụkwụ. Ugbu a, ndị a bụ nnukwu okwu mmeghe maka igwe kwụ otu ebe, ha dị mma maka njem na ịgba ịnyịnya ugwu, mana ịchọrọ ịgbago ezigbo ọgba tum tum, pụọ n'ime ọhịa, ịchọrọ otu igwe na-ajụ, ndị a na-agbanye n'etiti igwe kwụ otu ebe. Ha na-ebugharị cranks na ọ bụghị impeller n'onwe ya.
Ha dị oke mma maka ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ. Ngosipụta na njikwa ga-adị iche na nke ọzọ. Brand ga-enwe ụdị dị ka Bosch nke nwere ihe dịka ịnọdụ ala na ngosipụta isi mgbe ngosi Shimano na-adị obere karịa karịa ị ga-enwe ihe ndị a niile ihe Ihe nwere stats na ozi gbasara ha, na ụfọdụ ụdị dịka Ọpụrụiche dị oke egwu, nke pụtara na ị nwere naanị bọtịnụ ole na ole na njikwa gị iji gbanwee usoro enyemaka.
Ngosipụta nke igwe kwụ otu ebe gị na-enye ọtụtụ ozi. Chọta ihe dịka oke batrị ga-agwa gị ókè ole ị hapụrụ na batrị ahụ. Ma kwa ụdị ike ị nọ, ole ka ị na-ekpuchi, kilomita ole ị kpuchie na nkezi ọsọ gị.
Ozi zuru ezu zuru ezu, mana ọ ga-adị iche na ụdị akara ọ bụla. Ego ole ka ole ị nwere ike iji batrị e-igwe kwụ otu ebe? Ọfọn, ụfọdụ ndị na-emepụta batrị nwere ihe mgbako dị iche iche, nke pụtara na ị nwere ike ịga na weebụsaịtị ahụ, tinye data gbasara gị na igwe kwụ otu ebe gị, ọ ga-ebu amụma amụma ọtụtụ kilomita ị ga-esi na batrị e-igwe gị. Nke a bụ n'ezie ezigbo ohere.
Ọzọ dị ukwuu ihe gị e-bike si isi-ngosipụta bụ na ọ n'ezie na-ebu amụma otú ọtụtụ kilomita i hapụrụ na tank mgbe ị na-agba ịnyịnya. N'agbanyeghị ụdị ike ị nọ, ọ ga-egbochi ịnyagharị ma mee ka ị mara kilomita ole fọdụrụ na ọnọdụ ike ahọpụtara. Mana enwere ọtụtụ ihe nwere ike imetụta ndụ batrị, dịka: B.
Njem, ịdị elu, ọnọdụ nke ụzọ, ọnọdụ okpomọkụ, nhọrọ nke taya. Ndepụta nke ihe ndị a dị iche iche nwere ike imetụta batrị adịghị agwụ agwụ.Anyị ekwuola ihe niile gbasara ihe dị iche iche mejupụtara eMTB, mana kedu ka ha niile si arụkọ ọrụ iji mee ka igwe kwụ otu ebe a gaa n'ihu? Ọ dị mma ka ọ dị mfe ịchọta bọtịnụ ike, pịa bọtịnụ ahụ wee chere ka sistemụ rụọ ọrụ, bido, wee gbanye ụkwụ gị n'elu igwe kwụ otu ebe, ịhọrọ ụdị ike ị chọrọ ịbanye, ọ bụrụ ECO n'ụzọ niile ruo iji mee ngwangwa.
Tinye ụkwụ gị na pedal ozugbo pedals dị ntakịrị ntakịrị, moto ahụ maara na ịchọrọ enyemaka ụfọdụ mgbe ahụ ọ bụ ihe dị mfe nke ịpịgharị ụkwụ ị ga-agbago igwe kwụ otu ebe ma na-apụ n'oké ọhịa. Dị mfe. Ma olee otu ngwa-ngwa e-igwe kwụ otu ebe? Ọfọn, ọtụtụ e-igwe kwụ otu ebe na-ejedebe na 25 kilomita kwa elekere na ọtụtụ n'ime Europe, ma ọ bụ 32 kilomita kwa elekere ma ọ bụrụ na ịnọ na States ma ọ bụ Canada.
Nke a apụtaghị na ịnweghị ike ịga ọsọ ọsọ karịa ọsọ ndị a, ọ bụ naanị ọsọ nke motọ ahụ na-akwado. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị gafee oke ahụ, ọ dịịrị gị na otu ị ga - esi agba ịnyịnya, yana o doro anya na ịdị elu ga - enyere aka na nke ahụ. Ugbu a, igwe kwụ otu ebe ahụ maara na ọ na-agba ọsọ ahụ, site na ihe mmetụta ọsọ ọsọ, na-abụkarị na swingarm ma ọ bụ n'azụ igwe kwụ otu ebe, ọ na-enwekarị magnet iji gwa ole mgbanwe ọgba tum tum ahụ na-eme n'ezie.
Na njikọ ya na ngosipụta isi ya, ọ ga - ama mgbe injin ga - enyere gị aka yana mgbe ịkwesịrị gbanyụọ ya. Yabụ kedu ebe ị ga-esi gbago eMTB? N'ebe a na UK enwere m ike ịgba igwe eMTB ebe ọ bụla ịnwere ike ịnya ịnyịnya igwe ugwu. Mana ebe ozo n’uwa, iwu na agbanwe agbanwe, ya mere aka gi diri ichoputa ebe in’agbaala eMTB gi.
Chọrọ ikikere ọkwọ ụgbọ ala iji gbagoo eMTB? Ọfọn, mba ị chọghị ikikere ọkwọ ụgbọ ala iji nweta ọkwọ ụgbọ ala, amachibidoro eMTB. Mana ọ bụrụ na ị gafere igwe elektrọn a dị elu dịka R-Pedelec na S-Pedelec, ị ga-achọ ikikere ọkwọ ụgbọ ala, ụtụ isi, mkpuchi, na okpu ọgba tum tum kwesịrị ekwesị. Iwu ndị a dị iche n'akụkụ ụwa niile, yabụ ọ dị n'aka gị ịlele iwu ndị a ọzọ iji hụ ma ịchọrọ ikikere iji gafere igwe eletriki e-elu ndị a dị elu.
Mana ọ bụrụ n’ịnyịnya igwe kwụ otu ebe, nke a agaghị abụ nsogbu. Ya mere, ka anyị pụọ, enwere m olile anya na ị nwere mmasị na edemede taa banyere otu e-bike si arụ ọrụ. Nye mkpịsị aka ukwu ma ọ bụrụ na ọ masịrị ya ka ọ mezie ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ ma lelee isiokwu ọzọ, pịa ebe a ka ị hụ otu esi azụta ebike, nke a bụ ezigbo ederede.
Echefula imebi uwa n'etiti ihuenyo iji denye aha na EMBN. Lee gị ọzọ.
Ọ bụ igwe eletrik ka ọ dị mma mmega ahụ?
Na-agba ịnyịnya iheigwe eletrikna-adighi aghụghọ: gikanwere pedal na gịkagbaa kalori ume. Ọ dị ka ịnya nkịtịigwe kwụ otu ebe, dịtụ ntakịrị mfe. Na-agba ịnyịnya ihebu-igwe kwụ otu ebebuezigbo mmega. Ya mere nọkwasị a pedeleckaBurns calories - na ọtụtụ n'ime ha karịa ka ị chere.
Ọtụtụ mmadụ agbanyụrịrị edemede a mgbe ha nụsịrị okwu ndị a n'ihi na ọ bụrụ na ihe ndị a kwuru na GGN bụ ihe ọ bụla, ha bụ isiokwu na-ese okwu. Echere m na ọ na-esiri ike ịgọnahụ uru ọ bara maka ndị njem na-achọ ịchekwa ego ma ghara ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ọsụsọ maka ndị chọrọ ịbụ ndị na-acha akwụkwọ ndụ mgbe ha na-agba akwụkwọ ma ọ bụ na-aga ahịa, mana ha dị mma maka ndị na-agba ịnyịnya egwuregwu. dị ka Methis bụ Dan Lloyd ọ bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè nke na-achọghị ikwu ya n'ihu anya ya, mana ị 'Aga m ahapụ gị ka ị jee ije n'ụzọ dị ntakịrị na ị naghị etinye nnukwu ibu ma ị malitere ịmalite. afọ biya, akụkụ dị n'akụkụ na-ejedebe dị ka ndị na-ekiri ikuku na-ekubi ume, hụ ya ka ọ dị jụụ, ọ bụghị nnukwu, mana echere m na ọ ka dị nzuzu, emela ya na ndị ahụ ogologo, ogologo, ụkwụ na-egbu egbu na ngalaba ahụ ike. ọ hapụrụ onwe ya n'ezie, yabụ ajụjụ anyị ga-anwale ma zaa ụbọchi a bụ, Dan ọ ga-enwe ike dabara ọsịsọ? Ọ bụrụ na ọ dabara na igwe kwụ otu ebe, aga m achọpụta site na ịnya igwe. Anyị na-amalite n'ụtụtụ a na mmiri dị nkọ na 46km ogologo ụzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 kilomita na ọtụtụ ọzụzụ ọzụzụ ochie m na m nwere ike dabara ebe dị anya na-enye ngụkọta nke mita 750 dị elu na ee ee e mere site n'enyemaka nke Pinarello na Facool mana data ngosipụta adịghị mma ị nwere ike ịhapụ ya ka ọ gha ụgha mana agaghị m eme nke ahụ na njem m ga-eyi belt nke obi m ma jiri ike mita dabere na ị ga-ahụ otu m ga-esi sie ike ịrụ ọrụ ọbụlagodi enwetara m obere enyemaka n’aka enyi m ma biko hapụ ya Kpọbata m gị ndị na-ekiri m ndị enyi nke a bụ NitroPinarello Nitro m nitro ndị a bụ ndị anyị hụrụ n’anya ọ bụ ezie na ọ dị nwute na ụfọdụ n’ime ha akpọrọ m gị asị mana echegbula n’ihi na ụfọdụ n’ime ha kpọrọ ihe bụ na m maara na o siri ike ikwenye na m na-eche mgbe niile ee ee ka ndị na-ege ntị kwuo ntakịrị ihe gbasara gị tupu anyị amalite, dị ka ndị na - ekiri ihe nkiri a bụ Nitro p inheiros mbụ e-bike na dịka ị ga - atụ anya na Pinarello, ha rutere n’elu.
Nitro bụ igwe kwụ otu ebe II ma anyị nwetara ya. Ọ nwere otu Shimano ma ọ bụ nke tegramechanical nke 116 millimeter flatmount diski brek na ohere maka ihe ruru 28 millimeters nke taya na ọ bụ ngwa ngwa - ọ bụghị n'ihi m, n'ụzọ doro anya, ọ bụghị n'ihi m onye ọkwọ ụgbọala n'ihi ihe zoro n'okpuru okpu ihe atụ ya ma ọ bụ mma anyị ga-enye gị ihe niile nkọwa na nke a mgbe e mesịrị, ma mbụ m chọrọ na-aga a obere na-ezighị ezi na nitro ụda, nke a abụghị nke mbụ ụgbọ ala, m ụzọ na-abịa mara mma ngwa ngwa mgbe a Starter a na-akpọ ugbu a dị ka ị maara m adịghị 'dị ka opi nke m ịfụ ma m bụ onye na-agba ọsọ Stryver ugbu a na-anya ụgbọ elu a ka ọ ghara ịmasị ịhụ na m nwere ike iti oge m site na afọ isii gara aga, n'ezie ọ bụrụ na m mee mgbe ahụ, m ga-agharịrị mee ya ihe edeturu ya obi ike na sistemụ ọkwọ ụgbọala nke abalị ga-enye gị ihe ruru narị abụọ na iri ise karịa ị p Ma ọ bụrụ na m nwetara 15 Ọkwọ ụgbọala 0 okwu, ọ laghachiri 375, nke ahụ bụ ngụkọta nke 525 watts na ebe ọ bụ na m na-ugbu a arọ 72 n'arọ, banyere 7.3 watts kwa kilo m na-akpọkarị asị t nrịgo ya dị ka akwa akwa, m bụ ezigbo ọkwá nkà Dayand Climb m nọ na ya ugbu a, ejiri m ya ọtụtụ ugboro n'ụbọchị a na-akpọ zigzag maka ezigbo ihe kpatara ya, mana agaghị m ebido ime nke a ọ bụrụ na m na-akwa emo n'ihi na onye ji Karim ugbu a dị ka agbụrụ, ha egbuola ntakịrị ma ọ bụ nkezi nke 26 dara kwa elekere ebe a dị mwute na injin m na-apụ na 25, nke pụtara na n'azụ ngalaba nke usoro egwu ahụ Achọrọ m onwe m taa na enweghị m nkwado ọ bụla ma ọlị, ya mere ana m eme nke atọ ugbu a iji gbalịsie ike maka ihe dị ka watts 220, nke m hụgoro, na, mgbe m leliri anya, achọrọ m ilekwasị anya shalyly, m na-eme 26 mgbe kwa hour m na-eche nnu nwere ya slows a bit ma ka na-enweta enyemaka ka m na-aga n'ihu m na-agba ịnyịnya na aka na-eduzi gị azụ ala ka tangent nyocha ọ ga-akọwa a bit ihe banyere engine na-arụzi ụgbọala na igwe kwụ otu ebe a.
Ogologo okwu anya nwere ike icheta na ihe dị ka afọ abụọ na ọkara gara aga, m wee jiri igwe zoro ezo gbagoo igwe kwụ otu ebe, mana ọ mara mma n'oge ochie na ihe abiala ala mmụọ nke ukwuu kemgbe ahụ, yabụ Pinarello Nitro na-eji ọhụụ Zooeys anọ sistemụ modular ebe a, nke dị ugbu a bụ kọmpat na lightest na ahịa, n'ezie ọ bụ njikọ, ọtụtụ onyinye na imepụta ihe ọhụụ, ọ nwere ụzọ anọ dị iche iche, nke pụtara na n'ezie ị nweghị nkwado ikuku ikuku nke na-enye gị ihe ruru 125 Watts nke ike na-ewepụta ọnọdụ ruo 250 watts yana ruo na nke 400 watts ma ọ bụrụ na ịhọrọ ọnọdụ rọketi na echere m na nke ahụ dị mma nke Dan na-eji na ịrị elu taa M hụrụ n'anya ọnọdụ rọketi usoro niile a na-achịkwa. site na ntanetị, nke dị n'elu ebe a na ogwe ndị nwere ọkụ ọkụ 10 nke na-apụ nke nta nke nta dị ka azụ na-emepụta ndụ na mgbanwe nke agba dabere na ọnọdụ ị na-eji ya, usoro draịva niile dị elekere anọ kilogram isii, nke pụtara na igwe kwụ otu ebe a nke Pinarello nyefere anyị na-eri kilogram 13 na ọkara, n'adịghị ka akụkụ gara aga, anyị na-eji nke zoro ezo Motor, batrị adịghị ebe a na karama na onye na-ejide karama, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ime ọkpọ ala na n'ezie ọ bụrụ na ị kpebie na ịchọrọ ịga njem na-enweghị enyemaka ọ bụla, ịnwere ike wepu ya ma dochie ya site na Pinarello Dochie mma a na-enye ya na igwe kwụ otu ebe, nke na-ebelata nke a ihe dị ka kilogram iri na ọkara, ugbu a ọ bụghị naanị moto na batrị ahụ, Bazoo enweela.Ha mepụtara n'ime afọ ole na ole gara aga ma ugbu a wepụtara ngwa nke ha nke na-edekọ data data njem gị niile na-anakọta maka gị ma nyere gị aka ịnyagharịa na GPS. Get lerukwuo anya na ihe batrị batrị gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị na ala ma hụ ka ọ na-aga, ọchị, amaara m na Dinos Millstreet dị oke egwu na akara kwụ ọtọ nke m na-akpọkarị asị.
M ka na-arụ ọrụ na obi ise-ise banyere 350 watts site n'ụkwụ m ma eleghị anya ọ dị ntakịrị site na injin ahụ, mana ụmụ okorobịa ahụ nọlarịrị na olu m ga-agwa gị ihe dị mfe ichefu, na ị nwee enyemaka, n'ihi na ọ ka na-agba mbọ ị ga - eme ya ọbụlagodi na m gbanyụọ ya, ị mara ma ọ bụrụ na nke gị enweghị ezumike - oh oh nke ahụ bụ ezigbo nsogbu gị rọketi nwere ike ịlaghachi na-agabigaghị oke nke ọma mara abụba ugbu a ọ dabara nke ọma ka 50% ndụ batrị na gị, dị ka mywahoo, arịgoro m 840 mita na elu nke ahụ dị mma, mana agụụ na-agụ m ike gwụrụ m ike agwụghị m dịka m gaara ekweta na m gaara eme njem ahụ. ọkọlọtọ igwe kwụ otu ebe ma ọma, M nwere mmetụta na m nwere biya Ọ kwesịrị ihe, n'ezie, bụ isi ihe ma ọ bụrụ na anyị na-aga site na isi ọnụ ọgụgụ nke njem ngụkọta anya iri anọ na isii mgbe asaa kilomita otu awa na 36 nkeji iri abụọ- itoolu ebe atọ kilomita kwa hour nkezi ọsọ na a otutu ịrị a ngụkọta nke 8 Ogologo mita 42 na-agbago na njedebe ọnụ ọgụgụ niile dị mkpa mana mana ka anyị leba anya na ike, ike ike bụ 184 watts na ike nkịtị 217 nke na-akụda mmụọ abụghị ọtụtụ mgbe m mere ya na njem m na-atụrụ ndụ mana ọ nwere mmetụta siri ike na nke ahụ na-egosi na m obi ọnụego 149 nkezi obi ọnụego nke bụ mara mma siiri m ike, n'ezie mwute ozi ọma bụ m na-emeghị nke a mile, n'ezie, Agbaghara m ya site na sekọnd anọ. Adị m obere sekọnd nwayọ karịa afọ isii gara aga, ọbụlagodi na enyemaka niile sitere na e-bike nke m mere n'ezie iji dabara. Yabụ kedu ihe anyị ga - esi malite taa, ọ dị mma, m ka dị mma na ndammana, n'ezie ọ rịgoro na ndagwurugwu ahụ na ebe m nwere ike ịmalite mgbatị site taa wee bụrụ na m ga - enwe ụdị ọzụzụ ọzụzụ taa ma yabụ naanị nkwubi okwu anyị nwere ike ịbịaru bụ na enwere m ike ịnwe igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụrụ na ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị, enwere m ike ịkọwa na iji igwe elektrọnik anya ozugbo m dabara adaba bụ ihe ọzọ ị ga-adị mma ebe m bi ugbu a, okporo ụzọ ndị ahụ amachaghị nke ọma engine agaghị agba ọsọ na agbanyeghị mana na Hillier, enwere ọtụtụ ihe ọchị karịa ị dabara adaba.
Ọ na-atọ ha ụtọ ịme ugwu n'otu ọsọ m na-emebu, mana ekwenyesiri m ike na e-igwe kwụ otu ebe dị ka Nitro ekwesịghị ịkpọ asị, ha na-eme egwuregwu ahụ ma kwe ka ndị na-agba ọsọ ọsọ mee ngwa ngwa Soro ndị ọkwọ ụgbọ ala nwee ike jiri nwayọ maka ọtụtụ ebumnuche can nwere ike isi ike karịa maka ebumnuche ọ bụla site na mgbe a tụụrụ ime gị n'ọtụtụ afọ, ị nwere ike bụrụ ihe ekwesighi n'ozuzu ya, ma ọ bụ ị nwere nkwarụ ma ọ bụ ọrịa nke She brek ka ị nwee ike ịnagide onye ezinụlọ gị site n'enyemaka ma ọ bụ soro ndị enyi ma ọ bụ otu ndị ị na - enweghị ike ịnya, ma mgbe ị na - eme ya, ị ga - enwe ike iji enyemaka ahụ wee pụọ ya, nke nwere ike ọ gaghị agbadata otu ahụ. nụrụ echiche gị banyere igwe eletriki e-igwe, ma nke ọma ma nke ọjọọ, kpọrọ ya asị mgbe igwe kwụ otu ebe nọ na ngagharị gafere gị ma ọ bụrụ otu a, gịnị kpatara o ji enwe moto, n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na igwe elegharịrị agbanweela ndụ gị ịgba ígwè? ezi ma ọ bụ ọbụna ndụ gị n'ozuzu anyị ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị dị ka mgbe niile ị nwere ike ịhapụ echiche gị niile na akụkọ gị na ngalaba nkọwa dị n'okpuru ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ọzọ anyị nwere mbipụta ọhụrụ nke gsin gosi ebe a
Kedu igwe eletrik kachasị mma ma dị ọnụ ala?
NaE-Bikes kacha mmaNwere Ike Buyzụta
Uru Kachasị Mma. Aventon Ntanetị 350. aventon.com. $ 1,099.00. ZỤTA UGBU A.
Ọnụ ọnụIbu Hauler. Ike RadBikesRadWagon. radpowerbikes.com. $ 1,699.00. ZỤTA UGBU A.
B.-Fat. Sondors X. sondors.com. $ 1,199.00. Zụta ugbu a.
Ike. Blix Vika + blixbikes.com. $ 1,599.00.
Fechaa. Propella V3.4. propella.igwe kwụ otu ebe. $ 1,299.00.
Ọnwa Ise 15, 2020
Hey ụmụ okorobịa, ka anyị kwuo maka igwe elektrọnị dị ọnụ ala karịa n'ahịa ugbu a. Dị ka nke 2012, M kpuchie Olee ihe enyemaka 191 nke ndị a anyịnya igwe na m na-eche ihe ọ bụla n'okpuru $ 1500 bụ oké ọnụ. Ekpuchighị m igwe kwụ otu ebe ọ bụla dabara n'ụdị a, m na-agụkwa ya, biko mee ka m mara ihe ị chere.
Ma eleghị anya, agbaghara m ihe ọ bụla na m nwere ike ịdebe nke ahụ wee kpuchie ya n'ọdịnihu. Aga m na-emelite ụdị a. Nọgide Na-elekwa anya na ọwa a na weebụsaịtị m electricbikereview .com ebe m na-atụle ihe niile.
Ọ bụrụ na ịnọ ebe ahụ, lelee ebe a na-enwe nzukọ, n'ihi na e nwere ezigbo ndị nwere igwe kwụ otu ebe karịa ụbọchị ole na ole nwere ike ịhapụ nyocha. Nke ahụ bụ ebe ha biputere ha isiokwu na foto na stof. Ọ bara ezigbo uru.
Ya mere, ka anyị pụọ ozugbo na m ga-agwa gị ihe m n'elu họpụta mmadụ bụ. Nke mbụ bụ RadCity. Nke a bụ ihe m na-ahọrọ.
The igwe kwụ otu ebe bụ kediegwu. Ọ dị ka idozi ya na fenders. Ọ bụ taya mgbapu punching, n'akụkụ mgbidi na-atụgharị uche, ọkụ ọkụ e wuru n'ime ya ma ọ na-abịa na nkata abụọ na ọkwa dị elu yana enwere obere nha dị n'etiti ha abụọ.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-anagide ihe ma ọ bụ naanị chọọ etiti siri ike karị, ị ga-enweta ọkwa dị elu. Ego ziri ezi dị maka $ 1,500. Naanị ihu na igwe kwụ otu ebe a bụ igwe breeki igwe eji arụ ọrụ.
Ugbu a, a ka nwere ndị rotor 180 millimita na ndị a dịtụ mfe iji dozie na hydraulic, mana chọrọ obere aka aka. Rad na-arụ nnukwu ọrụ nke ndị na-ere ahịa. Ha nwere ezigbo aha na US, Canada na mba ụwa.
Nwere ike ịhụ mkpesa ole na ole n'ịntanetị banyere igwe kwụ otu ebe a, mana echere m na ọ bụ n'ihi na ha na-ere ọtụtụ ngwaahịa. Rad bụ n'ezie onye mgbasa ozi na saịtị ahụ, ma achọrọ m igosipụta nke a, mana naanị m na-akpọ ụlọ ọrụ ka ha kpọsaa na m tụkwasịrị obi n'ezie. N'ezie, papa m na nne nne m nwere RadRovers, nke bụ taya ha mara abụba, ha na-apụkwa n'otu batrị ahụ dị elu.
Yabụ ị nwere ike gbanwee nke ahụ n'etiti ụdị dị iche iche na ire ere ọnụ ahịa nke ụdị ndị a na-adịkarị mma. Maka m ọ bụ ihe dịka nnukwu foto ebe a. You're na-enweta nnukwu ọnụahịa, ngwaahịa bara ọgaranya dị na ngwakọta ụdị etiti dị iche iche yana nkwado ndị ahịa dị ukwuu ma ha nwere vans nwere ike ịnapụta ma hazie gị igwe kwụ otu ebe.
Ọtụtụ mgbe ị na-azụta igwe kwụ otu ebe ndị a dị ọnụ ala n'ịntanetị ma ọ na-egosi na nnukwu igbe. Mana na Rad, ị nwere nhọrọ ole na ole iji mee ka onye ọrụ ahụ nwee ọfụma ee ee ọ bụ otu n'ime echiche m kachasị mma. Ihe na-esote bụ igwe eletriki kachasị ọnụ ala ma m na-aghọ aghụghọ na nke a n'ihi na echere m na ọnụahịa ahụ bụ ụdị m gara maka Model Y sitere na Electric Bike Company.
Ugbu a, ụlọ ọrụ Electric Bike dị na Newport Beach. Ha na-ere ntanetị dị ka Rad, mana ha enweghị ọrụ nnyefe mkpanaka ma ha enweghị isi ụlọ ọrụ na Europe na Canada. Ma ngwaahịa ha na-efu ntakịrị karịa ka 1699 gbakwunyere 189 mbupu, ngwaahịa ha nwere diski diski hydraulic.
I nwere engine di ezigbo ike. Have nwere nkata ihu a dị jụụ nke batrị ahụ dabara na ya n'ezie, na-eme ka ọ baa uru karịa. Ejiri m ụdị batrị dị na etiti ahụ.
Echere m na ị nwere ike ịbawanye ikike nke batrị a site na itinye nkata. Companylọ ọrụ a ga-agba agba agba osisi, rim ndị ahụ, nkata, ha nwere ihe eji eji azụ azụ, ha nwekwara akara ngosi na-egosipụta ntụpọ na ọkụ ọkụ. Igwe ndị a dị ezigbo mma n'echiche m, ụlọ ọrụ ahụ na-arụkwa ezigbo ọrụ site na nkwado ndị ahịa Ya mere maka m, m ga-akwụ obere ụgwọ maka ihe dị ka nke a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ Ọ dị mma na njem ụgbọ mmiri, ọ ga-ewe oge dịka igwe kwụ otu ebe a na-arụ ọrụ ọfụma.
Ọ na-enye gị ike ahụ, ọ nwere trotul yana enyemaka pedal. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya. Ọzọ bụ ọnụ ọnụ, oke ọnụ nhọrọ otu, ọ bụ banyere Rad kwa.
Ha na-eme ihe magburu onwe ọrụ na-ndị price ihe, na ha dị nnọọ ulo oru a ọhụrụ nlereanya a na-akpọ RadMission na 999. Ya mere, na ngwaahịa a bụ otu ọsọ, ọ na-enweghị asaa Kwadobe dị ka RadCity ụdị na n'ezie ọtụtụ ndị ọzọ na igwe kwụ otu ebe anyịnya igwe . Ma ọ dị ntakịrị arọ, ọ dị arọ karịa ka m tụrụ anya maka otu ọsọ, mana ọ nwere ezigbo ibu ibu yana o nwere otu mgbodo ahụ n'ihu ka i wee tinye ihe nkwado.
Ngwa niile na-agbanwe agbanwe, gụnyere batrị ebe a, yabụ ike batrị dị ntakịrị karịa ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Nke ahụ bụ akụkụ nke otu ha si enweta mkpado ọnụ ma na-eme ka ọ dị mfe ma na -adịghị ka ọ dị mfe, ha nwere ngọngọ na-enweghị ntụpọ nke dị ezigbo mma ma ha ka nwere gas ma ha ka nwere taya na-egosipụta ntụpọ, yabụ na ị nwere otu agwakọta, ọkara larịị na otu akwa larịị nakwa agba isii dị iche iche. Nke ahụ dị mma maka igwe kwụ otu ebe $ 1000.
M n'ezie enyocha anyịnya igwe na-eresị na Amazon na site mgbe m nwetara igwe kwụ otu ebe, meghee ya, enyocha ya na gwa ya, na igwe kwụ otu ebe adịghị dị online ọzọ na nke ahụ bụ ihe dị nzuzu na ọ gosipụtara ọzọ. Yabụ na ọ dịka ndị mmadụ na-azụ ngwaahịa a ma ọ ga - abụrịrị nke nwere ike iwepu na nke ahụ bụ bummer n'ihi na igwe kwụ otu ebe a nwere ike ịdịgide ma ọ bụrụ na ị lekọta ha. Yabụ na ụlọ ọrụ dịka Rad, ebe ha nwere batrị a kwadoro nke ọma, ha nwere ngwa ọrụ ndị a niile ma ha nwere aha ọma na ịntanetị, maka m nke a bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ime n'ihe gbasara ọnụahịa ịbanye na nke ahụ. Ihe na-esote bụ igwe kwụ otu ebe akpọrọ n'ụdị a.
Ya mere, mgbe m tụlere igwe eletriki igwe eletrik, m gbalịrị ịghara iju mmiri na saịtị ahụ na mgbasa ozi ma ana m akpọ ụfọdụ ụlọ ọrụ m chere na ha nwere ngwaahịa dị mma iji kwalite igwe kwụ otu ebe ha site n'ụdị ọnụ ala ma ekwuru m ya ebe a mana ekwenyere m na ngwaahịa a. Echere m na ọ bụ ezigbo ihe. O doro anya na ọ sitere na Rad Power Bikes, nke ahụ bụ RadRunner. Ugbu a ọ dị na ụdị ọkọlọtọ a na-akpọsa; ọ bụ singlespeed, yiri RadMission.
Ihe puru iche banyere igwe ugboala a bu na odi ka igwe obere igwe, ma obu a na akpo ya igwe eji aba uru. Ọ bụ obere ala na ala, obere wiil, ma ka fọrọ nke nta ka ndị abụba taya sentimita asatọ tụnyere sentimita anọ, nke na-enye gị nkasi obi dị ka ọ na-enweghị a nkwusioru ndụdụ na-enye ya ohere na-aga-ụzọ, ikekwe site snow na ájá ma ọ bụ naanị larịị dịtụ mfe site na ala dị nro, dị ka ahịhịa, a Super 73 isit nwere ogologo nhọrọ oche banana ka ị nwee ike iburu onye njem na mkpọ, ma oche dị ka onyeisi ụgbọ mmiri ahụ dị n'oche oche nke na-arịgo na ala ka get wee nwee mgbatị ụkwụ zuru ezu ma nwee ọmarịcha ọfụma, ịnya ụgbọ ala, ọkụ ahụ, akara mgbapụta na-egosipụta akara taya na nkwado na netwọkụ na ihe niile m kwuru maka ya tupu Rad. N'ihi ya, ọ dị m mma ịhụ igwe kwụ otu ebe a.
Na ya ka o mee ihe di iche na nke bara uru, dika ihe eji ebu ibu, echere m na obu ihe puru iche. Dị ka ọ bụ n'ezie oyi mgbe ndị mmadụ nwere a igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ n ’ị dị njikere ịkwụ obere obere, ịnwere ike ịnweta RadRunner Plus, nke nwere fọkdụ nkwusioru nke nwere nkwalite ọkụ na ngwongwo ndị njem, gbakwunyere ụgbọ okporo ígwè ọsọ asaa.
Maka m ọ bara uru ego ahụ ma kpuchie ya na weebụsaịtị. Ọ dị mma ụmụ okorobịa, nke ikpeazụ bụ Mkpọrọ Nsọpụrụ na nke ahụ na-aga Electra Townie 7D, nke na-anọchi anya 7-speed derailleur. Electra bụ nke Trekand Trek bụ otu n'ime ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe atọ, Trek, na Specialized, nke ahụ kwesịrị ka a rịba ama na ụdị ndị a nwere ụlọ ahịa gafee US na mba ole na ole ị ga - agagharị ma mee mgbanwe dị mma ma hazie ya. ule igwe kwụ otu ebe.
Fọdụ n'ime isi ihe bụ na nzụta a na-abịa na agba asaa dị iche iche nke mara mma. Ọ na-aga na mkpuchi yinye. Ọ bụghị naanị ntọala.
specialized vita bike nyochaa
Agbanyeghị, ọ nweghị fend. Have ga-akwụ ụma maka ha ma ha agaghị ese ya. Ọzọ uru bụ na ọ dị na ma elu-etoju na a zuru etiti imewe, dị iche iche etiti size nwere ike ịbụ ihe nke a nwoke ma ọ bụ nwanyị style, dabere na nke etiti ụdị ị na-ahọrọ.
Ihe bụ, mgbe ị na-enweta nzọụkwụ-site na etiti, ị na-ejedebe na a obere ihe etiti Flex. Echere m, batrị na a igwe kwụ otu ebe bụ mara mma nke ukwuu kwupụta azụ na mara mma elu. Dika odi, ichoro ibu di ala na etiti, ya mere nke ahu bu ahia ozo.
Ikwesiri iji ike aka gi karie ike ma ha adighi nma, ha enweghi ihe mgbochi injin. Nke ahụ bụ n'ihi na igwe kwụ otu ebe a na - eji ihe mmetụta igwe na - arụ ọrụ kama ịnwe ihe mmetụta dị ka ọtụtụ ndị ọzọ nọ na ndepụta a. Nke ahụ pụtara na ọ dị mma na oge ịmalitere.
Mana ị ga-arụ ọrụ nke ọma na nke ahụ bụ akụkụ nke ihe na-enye igwe kwụ otu ebe a ezigbo mma, n'agbanyeghị ịnwe obere batrị, taya ndị ahụ anaghị eguzogide mgbapu, ha enweghị mpempe akụkụ mgbidi na-atụgharị uche, igwe kwụ otu ebe a adịghị 'abịa na ọkụ. Yabụ ị nwere ike ịkwụsị itinye ihe karịrị $ 1,500 iji mee ka ọ dị ka ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ndị anyị kwurula na mbụ, ị nwere ike ịga ozugbo ụlọ ahịa ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi ụfọdụ ebe ahụ, wee nwee onye ga - enyere gị aka n'anụ ahụ. Chọghị ichere ka ndị mmadụ ziga ihe n’iru.
Yabụ n'echiche nke m, nke a bụ nhọrọ dị oke mma. Ọ dabere na ihe ngwa gị chọrọ. Ndị be anyị, enwere m olileanya na nke a nyeere gị aka.
Thedị ọnụ ọnụ bụ otu n'ime ewu ewu na Traffic, enwere m ike ịghọta ihe kpatara na ị nwere ike ịnweta igwe kwụ otu ebe n'oge na-adịghị anya ọ bụrụ na ọ naghị efu ya. Ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ọgba tum tum ahụ ma enwere ike inwe udo na jụụ, ọ bụrụ na ezuru ya, ị gaghị efu nnukwu ego. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ na-agafe isi m, n'ezie, enwere oge ọ na - eme, ikekwe ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ntakịrị maka igwe kwụ otu ebe, ụgbọ ibu ibu, ma ọ bụ ụdị edemede ọ bụla enwere m ndepụta a maka ụdị 11 kacha elu na websaịtị kere ma cheta nyocha ndị a niile nwere nkeji iri atọ na stats niile na ihe niile dị omimi ma ọ bụrụ na ịchọta ihe masịrị gị na ndepụta a wee pịa obere ngwa ọrụ atụnyere.
Jiri ya tụnyere ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ dị na nke a na otu ndị ọzọ. Nzube m bụ inyere gị aka ịchọta igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ka nke a dịgide, nke ahụ bụ ihe m na-achọ inyere gị aka ịbelata ya ntakịrị, mana ekpuchibeghị m ihe niile. Ya mere, mee ka m mara ọzọ na ihe ndị a, ma eleghị anya m na-ezighi ezi.
Na mgbe m hụrụ ndị na-arịọ maka igwe kwụ otu ebe, m ga-arụ ọrụ iji kpuchie ya. Aga m abanye n'ime omimi ma nwee olile anya inyere gị aka. A hụrụ m gị n'anya.
Ndi igwe eletrik bara uru?
Ọfọn,igwe eletrikenye otu nnukwu uru dị ka ọdịnalaigwegụnyere ego echekwara (enweghị ikikere ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi achọrọ), ahụike na njikọta na obodo. Ezigbo uru ijiebikesm na-ele bụ arụmọrụ na-arị ugwu ma ọ bụ na-alụ ọgụ ifufe jikọtara na mma nso.Abụọ 17, 2021
Ndi igwe eletrik ruru ego?
Ọfọn,igwe eletrikenye otu nnukwu uru dị ka ọdịnalaigwena nsonyeegonchekwa (enweghị ikike ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi achọrọ), ahụike na njikọta nke ọma na obodo. Ezigbo uru ijiebikesm na-ele bụ arụmọrụ na-arị ugwu ma ọ bụ na-alụ ọgụ ifufe jikọtara na mma nso.Abụọ 17, 2021
Igwe igwe eletrik ga-agbada na ọnụahịa?
B.-anyịnya igwe ga-n'ezie-adị ọnụ ala karịa na ọgwụgwụ dị ka ihe ọ bụla ọzọ gadget ma ọ bụ mpempe technology. Naanịmeeatula anya yaọnụahịaidozialan’ime nanị ọnwa ole na ole ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ.
Ndi igwe eletrik nwere ike ịrị ugwu?
Azịza ya dị nkenke bụ ee.igwe eletriknwere ihe kariri ike ime ka ike ju ala nile. Ọ ka mma ma ọ bụrụ na gịigwe kwụ otu ebenwere igwe eji agba oso, n'ihi na ndia bu ezigbo maka ijikwa eluugwu ntangwa ngwa.Ọnwa iri 16, 2020
Kedu ihe kpatara igwe eletrik adịghị mma?
Oke ngwa ngwa ma ọ bụ ịmalite site na elueletrikgia si a nwụrụ anwụ nkwụsị bụ otu n'ime ndị kasị akpata obere ihe mberede metụtarabu-anyịnya igwe. Dịka ihe mberede dị otu a na-emekarị n'ụsọ dị obere, ha anaghị ebute oke mbibi ọ bụla. N'agbanyeghị nke a, ihe ndị a na-agbawa obi.
Gịnị mere e-bike ji dị oke ọnụ?
N'ozuzu,igwe eletrikdị nnọọ mmadị oke ọnụzụta karịa otanyịnya igwe. Isi ihe mere ha jidị oke ọnụọ bụ na ha nwere ọzọdị oke ọnụakụrụngwa ma nwee ọtụtụ ọnụ ahịa metụtara karịa ọdịnalaanyịnya igwe. Ọzọkwa, na-atụle haigwe eletrik, ha kwesịrị inwe ihe ndị magburu onwe ha na-egbochi mmiri.
Gọọmentị ga-enyere ndị na-agba ọkụ eletrik aka?
A na-akwụnye atụmatụ yiri nke ahụ na Switzerland maka onye Switzerlande-ịnyịnyaboom. Naọchịchịga-achọ onye ga-eweta nnyefe ya “ịzụta ihe niileanyịnya igwema na-agba ọsọ ihe omume niile ”, nwere atụmatụ emere n'oge ọkọchị na n'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ bụ ezie na egosighi ebe ndị ahụ.Ọnwa Ise 29, 2021
Igwe igwe eletrik ọ bụ ezigbo ụzọ iji gafere?
Igwe igwe eletriki (ebikes) nwere ike ịbụ ọsọ ọsọ, gburugburu ebe obibi na ụzọ dị ọnụ ahịa iji gbaa gburugburu. Ha na-abịa dị iche iche dịgasị iche iche dị ka Electric Mountain Bikes na Electric Hybrid Bikes. Yabụ, ma ị na-achọ iburu ibu ahụ n'ụkwụ ụkwụ ike gwụrụ ma ọ bụ gbasaa mgbatị dị mfe, enweghị ịgọnahụ etu igwe eletrik eletrik bara uru dị.
Kedu igwe igwe eletrik kachasị mma na Amazon?
Opeak Ebike Foldable Electric Bike 750W High Speed ​​Motor, 13.6AH Mbughari 48V Ebike… ANCHEER Electric Bike 14 '' Electric Bicycle, 500W Electric Commuter Bike 20MPH Ndị okenye Ebike na… QZF 48V 52V 36V Ebike Batrị, 13Ah / 14.5Ah / 20Ah Lithium ion Electric Bike… ANCHEER Folding Electric Bike Ebike, 20 '' Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu na 10.4AH wepụ…
Kedu igwe igwe eletrik kachasị mma na India?
Igwe igwe eletrik kachasị ewu ewu & amp; Ndị scooters gụnyere Ather 450X (Rs. 1.27 Lakh), Bajaj Chetak (Rs. 1.00 Lakh) na Revolt RV400 (Rs. 1.03 Lakh). Brandsdị kachasị elu nke na-emepụta igwe eletrik eletrik & amp; scooters bụ Ather, Bajaj, Revolt, Hero Electric, TVS.